Herinandro Fahatsiarovana – Tsunami sy Aoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2017 2:13 GMT
Efa herintaona izay no nisian'ilay loza mahatsiravina tamin'ny Tsunami Boxing Day. Nahitana zavatra maro kokoa mihoatra noho ny fizarany voina sy ny loza araka ny tokony ho izy ity taona ity. Rivo-doza, horohorontany tany Kashmir, ary loza an-jatony hafa izay tsy mba nivoaka tamin'ny vaovao iraisam-pirenena. Te hampahatsiahy antsika fa tsy mbola tapitra ao amin'ireo toerana ireo ny fanarenana ny fiainana ary mampahatsiahy antsika ny zava-nitrangan'ny taona sy ny ilàna Herinandro Fahatsiarovana ny Voina.
They need your help…. Can we harness that goodwill, that togetherness, that willingness to help once more?”
“Nandritra ny taona, nisy ireo loza hafa nanimba zavatra ihany koa: Ny tena nandravarava indrindra tamin'ireo: dia ny rivo-doza Katrina sy Rita tao amin'ny morontsiraka Atsimo-Atsinanan'i Etazonia, sy horohorontany goavana iray hafa tao akaikin'ny sisintanin'i Pakistana miaraka amin'i India.
Niteraka fahasimbana teo no eo ireo loza ireo, ary, isaky ny misy izany, dia miezaka nanampy izao tontolo izao. Satria miangona ny loza, nisy ny faharerahana betsaka. Angamba ambany ny tahirin'ny fiantran'ny olona. Angamba manamafy antsika ny mahita fijaliana be loatra.
Saingy, ny zava-misy dia tsy nitsahatra ny fijaliana tamin'ireny loza ireny. Mbola tsy tafarina tamin'ny loza 26 Desambra 2004 ny ampahany tao Atsimon'i Azia. Any Etazonia, tsy niverina tamin'ny laoniny ny tao New Orleans. Ao Pakistana, an'arivony no mbola tsy manan-kialofana, ary mety tsy ho tafavoaka velona amin'ny ririnina Himalayana henjana.
Mila ny fanampianao izy ireo …. Azontsika trandrahana ve izany fahalalahan-tanana izany, izany firaisankina izany, izany fahavononana hanampy izany indray? “
Crossroads Dispatches avy ao amin'ny Nosy Phi Phi nanoratra hoe:
Fotoana fohy taorian'ny nitenenan'ny praiminisitra lefitra, nankany amin'ny helo-drano izahay. Ankizivavy fotsifotsy enina na fito taona miaraka amin'ny akanjo fotsy mangatsiatsiaka no miondrika sy mivavaka.
Mametraka orkide fotsy nomena ho an'ny fianakaviana tsirairay tafavoaka velona nandritra ny lanonana izy tao amin'ny alitara voaravaka voninkazo, sary, hazo kely manitra ary fahatsiarovana manodidina ny hazo banyana voarakitra avana mamirapiratra. Mijanona ao aoriana miaraka amin'ny vato sarobidy ao aoriana ny reniny.
Tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao ny mahatsiaro fa raha manome miala vola am-paosy isika, dia tsy manadino ireo anton-javatra tsy dia fantatra. Raha tsy maintsy manome ho an'ny anton-javatra malaza ianao, azafady, aza manadino ny fandraisanao anjara amin'ny hafa. Tsarovy ireo niharam-boina, ary ampahatsiahivo ny fampanantenana nataon'ny governemanta sy ny sampan-draharahan'ny fanampiana.